Umthetho wamazwe ngamazwe kolwandle - iqoqo imithetho ethile futhi linezimiso ezicacile zilawule ubuhlobo lamazwe e ukusetshenziswa isikhala amanzi. Kusukela ezikhathini zasendulo, lokhu indawo ekhonzwa abantu ukuze wenze imisebenzi ehlukahlukene. Abantu wahlanganyela ababehamba olwandle, tinsita izimayini, ukucwaninga kwesayensi, njll Kulezi zinsuku-United nezinhlangano emhlabeni wonke bahlangana ndawonye ubudlelwano ezahlukene ngokuhamba imisebenzi eyenziwa ku komkhathi namanzi. Lezi izibopho zibuswa umthetho international kolwandle, okuyinto iqoqo imithetho zomthetho.
Ngenxa yesimo imisebenzi ekhiqizwa yamanzi, nemithetho elawula ke, ngeke omunye imikhakha ubuhlobo phakathi kwemibuso. Lawa:
- nenkululeko navigation olwandle;
- ilungelo ukunyakaza mahhala ezokuthutha zasolwandle emanzini indawo okuqondene nezinhlangano zasemazweni angaphandle;
- ilungelo ukuba sendleleni obunokuthula ngokusebenzisa besebunzimeni ezisetshenziswa ngenhloso imikhumbi yamazwe ngamazwe ukuba, njll
umthetho zasolwandle International livela yesimiso okudidiyelwe izenzo zomthetho kwemibuso. izindawo Water kuyiplanethi yethu ihlukaniswa njengoba:
- izindawo njengoMbusi wendawo yonke imikhawulo emngceleni;
- izikhala okungezona ezakho kunoma yiliphi izwe emhlabeni.
Kuye ubulungu iqembu elilodwa noma kwenye, izimo ezihlukile wezomthetho endaweni amanzi. Pacific nasolwandle, okuyinto ezibhekwa indawo isimo emazweni asogwini abe ngesimo esingokomthetho iyunifomu. Nokho, imibuso zomthetho amanzi indawo futhi archipelagic kanye okwenzeka ngaphakathi emabandleni ukuhluka nomunye. isikhala Hlukanisa esibheke besebunzimeni kuthiwa ukuthi asetshenziswe emagcekeni uthi ahlukahlukene.
Imithombo ngamazwe umthetho kolwandle - INgqungquthela eshalofini yezwekazi kanye izindawo zokudoba, ukulondolozwa kwemithombo yamanzi izikhala nezindawo ezisogwini. Isimiso Sokuthungatha kwezinkambiso ezithile kanye nezimiso mayelana nendlela esisebenzisa ngayo isikhala hlangothi, uthi inkululeko:
- ipayipi laying izintambo;
- elikushoyo ngezindaba zesayensi yocwaningo.
umthetho zasolwandle International ubeka amanzi sendawo kwakuwukuthi engaphansi izinkantolo of the State kabani ifulege bahlakulela phezu insika. amaphoyisa Military noma, kanye nemikhumbi semngceleni we-kwamanye amazwe awunawo Unelungelo lokufaka isicelo kubo yimuphi umkhawulo inkululeko izenzo zabo. Lesi simiso singasetshenziswa i- kuphela ezimweni ngokuqinile kungagcini, injongo okuyinto ukuqinisekisa ukuphepha navigation. Ngakho, enkantolo yezempi bayoba nelungelo ukuyokudla pirate imikhumbi nokubotjhwa ebhodini abanjalo. Ngemva kwalokho, i-International Yobulungisa ngoMthetho yoLwandle libona ekuqhutshweni ngezenzo ngokuphanga noma ukuboshwa, ubudlova noma ezinye izenzo ukudunwa ngubani zivalelwa nezisebenzi wenza ukuze bazizuzise bona. Nokho, lapho umkhumbi noma izindiza avalelwe ngokungenangqondo, ukukhokhela impahla ngoba umonakalo noma ukulahlekelwa. Isimiso esifanayo okumele asetshenziswe maqondana namalungelo zokushushiswa.
imithetho International avumele noma isiphi isimo ukubopha umkhumbi olwandle. Izenzo ezinjalo kumele senziwe uma umkhumbi bangaphandle yayiwukuba izaphulamthetho ngesikhathi khona imingcele yangaphakathi yezwe.
UN Convention wathola ukuthi isikhala ngaphandle kwamanzi indawo, kanye lingelakhe phansi kugcinelwe izinjongo zokuthula. Lokhu kusho ukuthi amazwe kungavunyelwa kulezi zindawo,, imisebenzi nolaka inkanuko futhi ukulwa namanye amazwe.
Yimaphi amadokhumenti adingekayo ukuze ahambe e-Uzbekistan. Amaphasipoti ase-Uzbekistan: incazelo, izinhlobo namaphethini
Indlu Guest "Sunny Ngendlu" (Vityazevo): incazelo, ukubuyekezwa